All Articles - Page 37 of 38 - Shop
Formal ဖက်ရှင်အတွက် Dress Codes တွေအကြောင်း…0345
The KaungHtet February 1, 2017 10:19 am February 1, 2017
ဒီပိုစ့်မှာတော့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ Dress code လေးတွေအကြောင်းပြောပြမှာပါ။ အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ပွဲလမ်းသဘင်တစ်ခုခုတက်ဖို့ ဖိတ်စာရတိုင်း ပွဲနဲ့ကိုက်ညီမယ့် မှန်ကန်တဲ့ Dress code ကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Dress codes တွေကို White tie, …
Make Your Statement, but Be Formal !!!0510
The KaungHtet February 1, 2017 5:01 am February 1, 2017
Do you haveaspecial occasion that you want to rock in the future? To getafashionable look in …
Can we call it “The Velvet” season? 1 753
The KaungHtet January 19, 2017 7:06 am January 19, 2017
Have you noticed huge loads of velvet in the market lately? Velvet is showing everywhere especially in this season! It …
ဖက်ရှင်လျှောက်လမ်းပေါ်မှာရော လမ်းမထက်မှာပါ တွေ့နေရတာကတော့ ကတ္တီပါတွေပါ…0287
The KaungHtet January 19, 2017 4:22 am January 19, 2017
အခုတလောမှာ ကတ္တီပါအသားတွေ အရမ်းခေတ်စားလာတာကို သတိထားမိကြလား..? ၂၀၁၆ ရဲ့ ဆောင်းဦးပိုင်းအချိန်ကနေစပြီး ကတ္တီပါသားတွေကို နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ တွေ့နေရမှာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကတ္တီပါသားက အနည်းငယ်ပြောင်ပြီး ပူတဲ့အတွက် ကတ္တီပါဝတ်ပြီး ရှိုးထုတ်မယ်ဆိုရင် ဆောင်းတွင်းက အသင့်တော်ဆုံးပါ။ ဟိုးအရင်ခေတ်ကတည်းက အခမ်းအနားတွေ …
“Greenery”, the color of 2017 !0373
The KaungHtet January 6, 2017 7:12 am January 6, 2017
Hello! Welcome to 2017 with our new post. Now is time to kick off the old year and start the …
၂၀၁၇ အတွက် Pantone က ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရောင်ကတော့ “Greenery” အစိမ်းရောင်လေးပါ…0287
The KaungHtet January 6, 2017 5:28 am January 6, 2017
Hello !!! နှစ်သစ်ကို ပိုစ့်အသစ်လေးတစ်ခုနဲ့ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်…နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ရောက်ပြီဆိုတော့ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်အသစ်လေးတွေနဲ့ ပြန်စကြရအောင်…၂၀၁၇ ရဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Pantone ကနေ အသစ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အရောင်လေးအကြောင်းစပြောမယ်နော်…ဒီနှစ်ကတော့ မနှစ်ကနဲ့ မတူပဲ အရောင်တစ်ရောင်ထဲကိုသာ ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ၂၀၁၆ တုန်းက …
၂၀၁၆ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဘယ်လိုဖက်ရှင်တွေ ခေတ်စားခဲ့လဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်…0296
The KaungHtet December 28, 2016 11:33 am December 28, 2016
၂၀၁၆ ဟာဆိုရင် ဖက်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တကယ်ကိုအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ…ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်ကို ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အညီ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေက အရင်နှစ်တွေထက် ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလာပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင် နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေ ဝတ်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေ၊ အနီရောင်ကော်ဇော်ပြင်ထက်က ဖက်ရှင်တွေကို နမူနာယူပြီး တမူဆန်းသစ်ထားတဲ့ဖက်ရှင်တွေက အရမ်းခေတ်စားလာပါတယ်။ …
2016 Year End Review: Digging into Fashion0312
The KaungHtet December 28, 2016 7:34 am December 28, 2016
2016 is drawing toaclose. When it comes to fashion, it was suchagreat and challenging year that …
အဆိုတော် နီနီခင်ဇော်ကတော့ သူ့ကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Super Red နှုတ်ခမ်းနီကို ပထမဦးဆုံး စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ…0318
The KaungHtet October 7, 2016 7:24 am October 7, 2016
အေးချမ်းတဲ့ ဆောင်းဦးကာလလေးနဲ့အတူ အဆိုတေ်ာ နီနီခင်ဇော်က Super Red နှုတ်ခမ်းနီတွေကို အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းမှာ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Super Red နှုတ်ခမ်းနီတွေကို Kissable Matte Lip Liquid လို့တောင် နာမည်ပေးထားတာကြောင့် နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိ ကြာကြာစွဲမလဲ …
It’s time for Super Red by Ni Ni Khin Zaw !!!0350
The KaungHtet October 7, 2016 6:51 am October 7, 2016
With the arrival of October, Super Red has come with four warm colors in full swing of early winter. As …
Monsoon Fashion Lookbook
❄Air con ကို မီတာခ အရမျးမကုနျအောငျဘယျလိုအသုံးပွုကွမလဲ?❄ 4697
၃ သိနျးကပျြအောကျ Samsung တံဆိပျဖုနျးမြား 3999
အိမျမှာသုံးဖို့ဖွဈဖွဈ၊ ရုံးမှာသုံးဖို့ဖွဈဖွဈ Printer လေးတဈလုံးဝယျဖို့လိုအပျနပွေီလား? 🤔 3509
သငျ့ရဲ့ ဝါသနာကို အခုပဲရှာဖှလေိုကျကွရအောငျ…. 3350
သငျဟာ မိတျကပျတှအေကွောငျးစိတျဝငျစားတဲ့သူတဈယောကျဆိုရငျ ဒီမေးခှနျးတှကေိုဖွကွေညျ့လိုကျပါဦး? 2764